Fortnite dia tonga amin'ny Android, fa tsy ao amin'ny Google Play Store | Vaovao IPhone
Fortnite dia tonga amin'ny Android, fa tsy ho ao amin'ny Google Play Store
Fortnite dia tsy isalasalana fa ny lalao video an'ny 2018, dia namorona legiona mpankafy, mpampiasa ary mpiorina manodidina azy izay mametraka azy ho atiny voalohany jerena amin'ny sehatra video streaming toa ny Twitch na YouTube. Mazava fa tena tian'i Fortnite izany, saingy tsy eto isika anio hamakafaka ny antony nahatonga ny lalao FreeToPlay lasa fahombiazana tsy manam-paharoa. Manala ny Google ny Lalao Epic, Fortnite dia tsy ho ao amin'ny Google Play Store. Raha te-hametraka ny kinova Android an'ny lalao malaza ianao dia tsy maintsy mampiasa mekanisma hafa.
Araka ny resadresaka nifanaovana izay nomen'ny mpanorina ny Epic Games Eurogamer Vao haingana, Ny antony tsy avelan'izy ireo hametraka Fortnite ao amin'ny Google Play Store dia ity:
Ny 30% dia taha ambony loatra eto amin'izao tontolo izao izay ny 70% raisin'ireo mpamolavola dia tsy maintsy miantoka ny vidin'ny fampandrosoana, ny fandidiana ary ny fanohanana ny lalao video. Samy mandoa vola tsy mitovy amin'ny Apple sy Google amin'ny serivisy omeny.
Mazava fa amin'ny Epic Games dia tsy tian'izy ireo ny mizara ny mofomamy amin'ireo mpanamboatra rindrambaiko. Ny mahasamihafa an'ity tranga ity dia ny fametrahana rindranasa amin'ny iOS, ny hany fomba azo antoka anaovana azy dia amin'ny alàlan'ny App Store, tsy lazaina intsony ny fahasarotana amin'ny fametrahana sy ny fampiharana fampiharana vaky. Izany no antony ao amin'ny Epic Games, mahafantatra ny fahalemena raha ny amin'ny fametrahana apetraka amin'ny fitaovana Android, dia nahita lalan-dra izy ireo mba hamonjy ny tahan'ny 30% apetraka amin'ny fifampiraharahana natao tao anatin'ny Google Play. Fivarotana. Na izany aza, Tsy tokony hadinontsika fa ny fametrahana rindranasa avy amin'ny loharano ivelany dia tsy isalasalana fa loza mitatao amin'ny filaminana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Fortnite dia tonga amin'ny Android, fa tsy ho ao amin'ny Google Play Store
"Epic Games dia manetry tena an'i Google," na dia moka aza ny Apple. Ary tara volana maromaro vao tonga any Android izy ireo, lamba inona izany… ..
Eto ihany no voadohona dia ireo mpampiasa, raha tsy hiteny afa-tsy ny amin'ny 2019 dia tsy hijanona afa-tsy amin'ny terminal Samsung. Raha tompon'andraikitra amin'ny Google aho, ny terminal rehetra misy an'io APK io dia hanafoanana ny fivarotana. Raha mahery vaika ireo an'ny Epic GAmes izay mamorona ny rafitra fiasan'izy ireo sy ny terminal-ny ... raha afaka 2 taona dia ho tantara, toy ny minecraft sy ny lamaody. #EpicGamesSucks
Ity horonan-tsary ity dia mampiseho ny iPhone X vaovao miasa
Ny mety ho Dual-SIM amin'ny iPhone manaraka dia mety voafetra amin'ny kinova 6.1-inch